एसीई अवरोधकर्ताहरू बनाम बेटा ब्लकरहरू: कुन उच्च रक्तचाप औषधि तपाईंको लागि सही छ? - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य समुदाय, कल्याण समाचार कम्पनी, समाचार औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी, औषधि जानकारी कम्पनी, चेकआउट चेकआउट औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार खेलहरु
मुख्य >> औषधि जानकारी >> ACE अवरोधकर्ताहरू बनाम बेटा ब्लकरहरू: कुन रक्तचाप औषधी तपाईंको लागि सही छ?
ACE अवरोधकर्ताहरू बनाम बेटा ब्लकरहरू: कुन रक्तचाप औषधी तपाईंको लागि सही छ?
पचहत्तर अमेरिकी अमेरिकी वयस्कको उच्च रक्तचाप (उच्च रक्तचाप) छ, तर मात्र % 54% ती मध्येको तिनीहरूको नियन्त्रण नियन्त्रणमा छ। भाग्यवस उच्च रक्तचाप जस्तो सामान्य अवस्थाको लागि, त्यहाँ औषधीहरूको विभिन्न प्रकार छन् जुन मद्दत गर्न सक्दछ। ती मध्ये ACE अवरोधकर्ता र बीटा ब्लकरहरू हुन्, जुन प्रायः डाक्टरहरूले कुनै पनि अन्य प्रकारका औषधि भन्दा पहिले लेख्दछन्।
यदि तपाईं लक्षणहीन हुनुहुन्छ भने धेरै उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिहरू जस्तो, एक डाक्टरले सम्भवतः पहिले एसीई इनहिबिटर प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नेछ। यदि तपाईंको उच्च रक्तचाप छातीमा दुखाइ वा चिन्ताको साथमा छ भने, बीटा अवरोधक राम्रो विकल्प हुन सक्छ। डाक्टरहरूले केही खास अवस्थाहरूमा एकै समयमा दुबै प्रकारका औषधीहरू पनि लेख्न सक्छन्।
तपाईको लागि रक्तचापको उत्तम औषधी के हो? यो गाइड प्रयोग गरी ACE अवरोधकर्ताहरू बनाम। बेटा ब्लकरहरू तपाईको अर्को डाक्टरको भ्रमणको लागि तयारी गर्न।
Acebutolol HCL मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
Acebutolol HCL मूल्य सतर्कताहरूको लागि साइन अप गर्नुहोस् र मूल्य परिवर्तन भए पछि फेला पार्नुहोस्!
कसरी ACE अवरोधकर्ताहरू र बीटा ब्लकरहरू काम गर्दछन्?
एसीई अवरोधकर्ताहरू (एंजियोटेन्सिन-रूपान्तरण-एन्जाइम इनहिबिटरहरू) रक्त नलीहरू विभाजित गर्दछ र रक्त मात्रा घटाउँछ, जसले रक्तचाप कम गर्दछ र मुटुमा रगत प्रवाह बढाउँदछ। त्यसो गर्न, ACE अवरोधकर्ताहरू एंजियोटेन्सिन-रूपान्तरण गर्ने एन्जाइमलाई ब्लक गर्नुहोस् एन्जियोटेन्सिन I लाई एंजियोटेंसिन II मा रूपान्तरण गर्न - एक हर्मोन जसले रक्त वाहिकाहरूलाई सीमित बनाउँछ। हर्मोन ब्लक गरेर, एक व्यक्तिको रक्तचाप कम छ।
ACE इनहिबिटरहरू प्राय: उच्च रक्तचाप र हृदय विफलताको उपचार गर्न डाक्टरहरूले सिफारिस गर्दछन्। उनीहरूले हार्ट अटैक (मायोकार्डियल इन्फेक्शन) पछि मृत्युको जोखिम कम गर्न पनि मद्दत गर्न सक्दछन्।
बीटा ब्लकरहरू (बीटा-एड्रेनर्जिक ब्लकि agents एजेन्टहरू) तनाव हार्मोनको प्रभावहरू रोक्दछ जुन सहानुभूतिपूर्ण स्नायु प्रणालीको हिस्सा हो। यी हार्मोनहरूमा नोरपिनफ्राइन र एपिनेफ्रिन समावेश हुन्छ (पनि भनिन्छ एड्रेनालाईन )। यी हार्मोनहरूलाई रोक्नाले रक्त नलीहरूलाई आराम गर्न र डिलाट गर्न अनुमति दिन्छ। पालैपालो, बीटा ब्लकरहरू मुटुको धडकन धीमा गर्न सक्छन्, रक्तचाप कम गर्न, र रगत प्रवाह सुधार गर्न सक्नुहुन्छ।
बीटा ब्लकरले उच्च रक्तचापको साथसाथै अन्य मानव रोगहरू जस्तै कन्जेस्टिभ मुटुको असफलता, असामान्य हृदय लय, चिन्ता, र छाती दुख्ने उपचार गर्न सक्छ।
नाक बहने र छींकने को लागी काउन्टर औषधि भन्दा राम्रो
ACE अवरोधकर्ताहरू बिटा ब्लकरहरू बनाम
ACE अवरोधकर्ताहरू बीटा ब्लकरहरू
स्वास्थ्य अवस्थाको उपचार गरियो
सामान्यतया निर्धारित औषधिहरू
केहि वजन बढाउन को लागी हुन सक्छ
गर्भवती महिलाहरूको लागि खतरनाक र जन्म दोष निम्त्याउन सक्छ
पोटेशियम स्तर बढाउँछ र हाइपरक्लेमिया हुन सक्छ
केहि कोलेस्ट्रॉल र ट्राइग्लिसेराइड स्तर लाई असर गर्न सक्छ
पोटेशियम पूरकहरू वा नुन विकल्पहरू जसमा पोटेशियम हुन्छ
के तपाइँ बीटा ब्लकरहरूसँग एसीई अवरोधकर्ताहरू लिन सक्नुहुन्छ?
उच्च जोखिमको उच्च रक्तचाप बिरामीहरू वा कोरोनरी हृदय रोग वा क्रॉनिक हार्ट फेल्योर जस्ता केहि निश्चित अवस्था भएका व्यक्तिहरूको लागि रक्तचापको स्तरलाई अनुकूलित गर्न एकै समयमा एक डाक्टरले एसीई इनहिबिटर र बीटा ब्लकर लेख्न सक्छ।
उच्च रक्तचाप भएका अनुमानित of 75% बिरामीहरूलाई उनीहरूको रक्तचाप लक्ष्यमा पुग्न प्राय: संयोजन उपचार (एक भन्दा बढि औषधि) चाहिन्छ। अमेरिकी उच्च रक्तचाप समाजको जर्नल । यस संयोजन उपचारमा एकै समयमा ACE इनहिबिटरहरू र बीटा ब्लकरहरू लिने वा रक्तचापको केही अन्य प्रकारको औषधीहरू जस्ता एक एन्जियोटेन्सिन रिसेप्टर ब्लकरहरू (एआरबी) को साथ एक लिन शामिल हुन सक्छ।
ACE इनहिबिटरहरू र बीटा ब्लकरहरू बिभिन्न किसिमले काम गर्दछन् र शरीरका विभिन्न भागहरूलाई लक्षित गर्दछ। यस तरिकाले तिनीहरू एक अर्काको पूरक हुन सक्छन्।
दुबै ACE अवरोधकर्ताहरू र बीटा ब्लकरहरू गर्भवती महिलाहरूको लागि खतरनाक हुन सक्छन्। तिनीहरू कम रक्तचापबाट चक्कर आउन सक्छ र सम्भावित जन्म दोष पैदा गर्न सक्छ। यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ वा गर्भवती हुन सक्नुहुन्छ भने, बिटा ब्लकरहरू वा ACE अवरोधकर्ता तपाईंको लागि सहि छन् कि हुन्न भनेर डाक्टरसँग कुरा गर्नु उत्तम तरिका हो।
ACE अवरोधकर्ताहरूले रगत पोटेशियमको स्तर बढाउँदछ, त्यसैले उपचारको क्रममा पोटेशियम सेवन निगरानी गर्न आवश्यक छ। नतिजा स्वरूप, पोटेशियम सप्लीमेन्ट लिन वा नुनको विकल्पहरू प्रयोग गर्दा जसले पोटेशियम समावेश गर्दछ अत्यधिक रगत पोटाशियम लेवल (हाइपरक्लेमिया) निम्त्याउन सक्छ। हाइपरक्लेमियाले अन्य सम्भावित जीवनलाई जोखिममा पुर्‍याउने स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। हाइपरक्लेमियाका लक्षणहरूमा भ्रम, अनियमित मुटुको धड्कन, र हात वा अनुहारमा झर्को वा सुन्नपन समावेश छ।
अर्कोतर्फ, केहि बीटा ब्लकरहरूले ट्राइग्लिसराइडहरू बढाउन र राम्रो कोलेस्ट्रोलको स्तर घटाउन सक्छ। यो सामान्यतया अस्थायी हो तर मेटाबोलिक सिन्ड्रोम भएका बिरामीहरूलाई असर गर्न सक्छ।
नन्स्टेरॉइडल एन्टी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स (एनएसएआईडी) जस्तै आइबुप्रोफेन, एडभिल, र एलेभसँग लिईए ACE अवरोधकर्ताहरू र बीटा ब्लकरहरू प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दैनन्। कुनै पनि NSAID लिनु अघि ACE इनहिबिटरहरू, बिटा ब्लकरहरू, वा दुबै लिनु अघि आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्।
बीटा ब्लकरबाट ACE अवरोधकर्तामा स्विच गर्दै
कहिलेकाँही, एक डाक्टरले तपाइँको पर्चा बीटा अवरोधकको लागि एसीई अवरोधकर्ता वा यसको विपरितमा परिवर्तन गर्न सक्दछ।
यस्तो स्थितिमा जब बिरामीहरू कम मुटुको दर वा कार्डियक ताल असामान्यताहरू भएका छन्, या त बीटा ब्लकरको खुराक कम गर्नु आवश्यक छ, वा ACEi जस्ता वैकल्पिक रक्तचाप औषधि प्रयोग गर्न सकिन्छ, भन्छ। आतिफ जफर , एमडी, न्यू मेक्सिको स्ट्रोक कार्यक्रम विश्वविद्यालयको मेडिकल निर्देशक। अर्को परिदृश्यमा, जहाँ बिरामीहरूलाई अन्तर्निहित रेनल धमनी रोग छ (रेनल धमनीहरूको स्टेनोसिस जस्तो), एसीईआई रक्तचाप नियन्त्रणको लागि सिफारिश गरिदैन। अन्य बीपी औषधीहरू ती बिरामीहरूका लागि उत्तम उपयुक्त हुन्छन्।
केहि अध्ययन सुझाव दिनुहोस् कि एटाई अवरोधकर्ताहरूमा बीटा ब्लकरहरू परिवर्तन गर्दा निद्राको लक्षणहरू कम गर्न र अनुभूति सुधार गर्न सक्दछ। यद्यपि यसको मतलब यो होइन कि बीटा ब्लकरहरू ACE अवरोधकर्ताहरू भन्दा उत्तम छन्।
प्रत्येक औषधिको उद्देश्य हुन्छ र अर्को भन्दा एक विशेष अवस्थाको उपचारमा राम्रो हुन सक्छ। [ACE अवरोधकर्ताहरू] पहिलो-लाइन थेरापी हो भने बीटा ब्लकरहरूलाई बीपी प्रबन्धनको लागि दोस्रो-रेखा उपचारको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ, डा। जफर भन्छन्। जे होस्, कोरोनरी धमनी रोग (सीएडी), वा उच्च रक्तचापको कोमोरबिडको रूपमा स्थिर इस्कीमिक हृदय रोग भएका बिरामीहरूमा बीटा ब्लकरहरू र एसीईआई पहिलो-लाइन छनौट सिफारिश गरिन्छ।
सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, बीटा ब्लकरबाट ACE अवरोधकर्तामा स्विच गर्ने कि नगर्ने भन्ने डाक्टर वा मेडिकल पेशेवरसँग कुरा गर्नु नै उत्तम विकल्प हो तपाईको उपचारको प्रतिक्रिया र कुनै पनि साइड इफेक्टको अनुभवको आधारमा तपाईको लागि सही विकल्प हो।
कुनै पनि औषधीको रूपमा, त्यहाँ साइड इफेक्टको लागि सम्भाव्यता सधैं हुन्छ। बीटा ब्लकरहरू, ACE इनहिबिटरहरू लिनु, वा दुबै निम्न केही साइड इफेक्टको परिणाम दिन सक्छ:
ACE अवरोधकर्ता बनाम बीटा अवरोधक साइड इफेक्टहरू
ACE अवरोध साइड इफेक्टहरू बीटा अवरोधक साइड इफेक्टहरू
खुजली छाला दाग
मुखमा धातुको वा नुन स्वाद
चिसो हात र खुट्टा
सुख्खा मुख, छाला र आँखा
साइड इफेक्टको सूची विस्तृत छैन। एक चिकित्सा पेशेवरले तपाइँलाई ACE अवरोधकर्ता बनाम बिटा ब्लकरहरूसँग सम्बन्धित साइड इफेक्टहरूको पूर्ण सूची दिन सक्छ।
यद्यपि यो दुर्लभ हो, ACE अवरोधकर्ता र बीटा ब्लकरहरू अधिक गम्भीर साइड इफेक्टको साथ सम्बन्धित हुन सक्छ। ACE अवरोध लिने कारण हुन सक्छ एंजियोएडेमा , एक दुर्लभ अवस्था जसले अनुहारको शरीरका अन्य भागहरूका सूजन निम्त्याउँछ। ACE अवरोध गर्नेहरूले किडनी विफलता वा सेतो रक्त कोशिकामा कमी हुन सक्छ।
बीटा ब्लकरहरू गम्भीर दमको हमलाको कारण छ। मधुमेह भएका मानिसहरूलाई बिटा ब्लकरले शरीरलाई कम रगतमा चिनी देखाउनबाट जोगाउन सक्छ (जस्तै कम्पन र धमकी)। बीटा ब्लकरहरू लिँदा रक्तचाप स्तर र मुटुको दर निगरानी गर्नै पर्दछ।
सबै भन्दा राम्रो उच्च रक्तचाप औषधी के हो?
यद्यपि त्यहाँ कुनै एकल औषधि छैन जुन उच्च रक्तचापको उपचारको लागि उत्तम हो, ACE इनहिबिटरहरू र बीटा ब्लकरहरू उच्च रक्तचापको सबैभन्दा लोकप्रिय प्रकारका औषधी हुन्। निर्धारित औषधि व्यक्तिहरूको चिकित्सा इतिहास, लक्षणहरू, र उपचारको प्रतिक्रियामा निर्भर गर्दछ। एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवर ले निर्धारित गर्न सहयोग गर्न सक्छ उत्तम उच्च रक्तचाप औषधी केस-द्वारा-केस आधारमा। यहाँ उच्च रक्तचाप को उपचार को लागी केहि सामान्यतया निर्धारित औषधिहरु को एक सूची छ:
ACE अवरोधकर्ता बनाम बीटा अवरोधक औषधीहरू
लोटेंसिन (benazepril HCl)
वासोटेक (इनालाप्रिल पुरुषेट)
क्यापोटेन ( क्याप्टोप्रिल )
एकुप्रिल ( क्विनाप्रिल एचसीएल )
अल्तास ( रामिप्रिल )
युनिवास्क ( मोएक्सिप्रिल एचसीएल )
माभिक ( trandolapril )
Aceon ( पेरिन्डोप्रिल एरबुमिन )
सांप्रदायिक ( Acebutolol HCl )
टेनोर्मिन ( atenolol )
जेबेटा ( bisoprolol fumarate )
Lopressor ( मेट्रोप्रोल टार्टरेट )
टोपोल एक्सएल ( metoprolol सक्सिनेट )
कोरेग ( carvedilol )
कर्गार्ड ( नाडोलोल )
Indender LA ( propranolol )
रक्तचाप औषधीहरू उनीहरूले रक्तचाप कम गर्ने र हृदयघात, स्ट्रोक, र मुटुको विफलताको जोखिम कम गर्ने आधारमा चयन गरिन्छ।अमेरिकी उच्च रक्तचाप समाजको जर्नल। यदि एसीई अवरोधकर्ता वा बीटा अवरोधकले तपाईंको लागि काम गर्दैन भने, तपाईंको डाक्टरले अर्को प्रकारको एन्टिहाइपरपोर्टिभ औषधि सिफारिस गर्न सक्छ, जस्तै क्याल्सियम च्यानल ब्लकरहरू, मूत्रवर्धक, अल्फा ब्लकरहरू, इत्यादि।
थप रूपमा, जीवनशैली परिवर्तन औषधिको साथ रक्तचाप प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्न सक्छ। तर सबै भन्दा बढि, एक चिकित्सा पेशेवर ले तपाइँको लक्षण र चिकित्सा ईतिहासको आधारमा तपाइँको लागि उत्तम उपचार योजना निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ।
एफडीएले OTC को उपयोगको लागि सामयिक गठिया औषधि वोल्टारेनलाई अनुमोदन गर्दछ
तपाइँ के को लागी पेप्टो बिस्मोल को उपयोग गर्नुहुन्छ
म कसरी मूत्र पथ संक्रमण बाट छुटकारा पाउन सक्छु?
तिनीहरूले तपाइँलाई डेपो शट कहाँ दिन्छन्
एक महिला को लागी एक सामान्य hematocrit स्तर के हो
त्यहाँ chantix को एक सामान्य संस्करण छ